Easy Siyaabaha Bilaash ilaa Space on iPhone ah o
Siyaabo Sahlan ee cadeeyo Space on iPhone
> Resource > Clean-up > Siyaabo Sahlan ee cadeeyo Space on iPhone
Si ka duwan Android ama Symbian telefoonada, iPhone ma kuu ogolaaneyso in dadka isticmaala ay ku darto card SD ah in ay tahay meel dheeraad ah si ay u kaydiso songs, barnaamijyadooda, ama videos. Haddii aad iPhone egyahay meel bannaan, si ay u dar waxyaabaha cusub, waa in aad barato sidii aad u lacag la'aan ah ilaa meel aad iPhone. Waxa ay u muuqataa soo reynaya sidii meel on iPhone waa arrin adag. Dhab ahaantii, waa mid aad u fudud. Aynu hoos u hesho in ay hawsha la xorayn, ilaa meel ku iPhone.
Qaybta 1. Ka saar Media Faylal ay ka iPhone
Qaybta 2. Ka saar Apps ka iPhone
Qaybta 1. Ka saar Media Files (Songs, Playlists, Video, Lugood U, Podcasts, iyo Sawirro)
Haddii aad iPhone waxaa lagu cabudhiyay songs, bandhigyada TV, filimada, ama jir Lugood U, Podcasts, in videos qabtay iyo sawiro, si lacag la'aan ah ilaa meel aad iPhone, waxa ugu horeeya ee waa inaad sidaas u yeelaan inay iyaga ka dhaqaajiyo.
Xalka 1. Gacanta saar Media Faylal ay ku iPhone oo bilaash ah ilaa meel iPhone
# 1. Haddii aad iPhone waa in macruufka 5 ama 6 macruufka, aad awoodaan in ay soo saarto alaabta oo dhan ee xunbo Settings> Isticmaalka. Markaas uu furmo suuqa cusub, oo dhan Chine waxaa lagu soo bandhigaa ay size dhanka midig. By default, oo dhan Chine waxaa lagu kala soocaa by size. Riix app. Tirtirid xaq u leedahay inaad ka tagay si ay awood ikhtiyaarka "Delete". Tusaale ahaan, si meesha looga saaro music, kaliya aad u baahan tahay inaad guji Settings> Isticmaalka> Music. Tirtirid midig iyo bidix toona la saaro dhamaan heesaha iyo playlists in app Music ah.
# 2. Haddii iPhone waddaa in macruufka 7, ikhtiyaarka kor ku xusan oo aan hadda loo bixiyo. Xaaladdan oo kale, si meesha looga saaro files warbaahinta, aad u malaynayeen in ay sameeyaan waxa ay ka mid-by-mid aad iPhone gacanta. Halkan qaadashada saareen music sida tusaale. Waa in aad guji app Music ku saabsan iPhone. Markaas uu furmo, dooro hees hormariyo bin ciidda.
Fiiro gaar ah: Si looga fogaado badiyay file kasta oo warbaahinta in aad rabto in aad sii, ka hor inta laga saaro iPhone, waa in gurmad aad iyaga ka mid ah inay Lugood Library ama iPhone. Si arrintan loo sameeyo, waa in aad isku daydo Wondershare TunesGo (version Windows) ama Wondershare TunesGo (Mac). Waxay awoodaan inay gurmad oo dhan files warbaahinta kor ku xusan si aad Lugood Library ama computer.
Xalka 2. Ka saar Media Faylal ay ku iPhone caqligiisu
Dhab ahaantii, waxaad had iyo jeer u baahan tahay in ay sii qaar ka mid ah files warbaahinta iyo tirtirto kuwa aan la rabin aad iPhone, sax? Ok. Xaaladdan oo kale, halkii ay waqti dheer inay ka soo saarto kuwa aan la rabin gacanta, waxaad isku daydaa inaad qalab si aad u dhaqso u samee. Wondershare TunesGo iyo Wondershare TunesGo (Mac) muujin doonaa files warbaahinta in daaqadaha, kuu oggolaadaan in aad xulan Dufcaddii ah ee files iyo iyaga isla tirtirto.
Waxaad kala soo bixi kartaa TunesGo ku haboonaa in isku day ah!
Qaybta 2. saar iPhone Apps oo bilaash ah ilaa Space on iPhone
Mararka qaarkood kulan oo Chine hal abuur degi doono inta badan aad meel iPhone. Haddii aadan rabin inaad ku isticmaasho, waxaad iyaga ka saarto waa in aad ka iPhone la Lugood ugu on your computer.
Connect aad iPhone la your computer iyo abuurtaan Lugood,
Guji View> Show galeeysid. Under Qalabka bidixda, guji si aad iPhone. Oo dhinaca midig ee suuqa, guji Apps.
Laga soo bilaabo halkan, waa in aad kala soocaan barnaamijyadooda by size in uu soo bandhigo kuwa badan oo dhanka hore. Riix badhanka saar on xaq ah tirtirto ee Chine aan la rabin.
Fiiro gaar ah: Ha ugu welwelina doonaya aad iyaga maalin maalmaha ka mid. Haddii dhammaan Chine, kuwaas oo la iibsan karo ka Lugood Store, iyagu waxa lagu hayn doona wax ka iibsatay.
Sidee si ay u gudbiyaan Music inay iPhone aan Lugood
10 Best Phone Apps Nadiif ah
10 Beddelka nadiifi Master for Android
Sida loo Cad History, Cache, iyo Kukiyada ka iPad